5 Mora raisina Transport Hacks Fa Luton Travelers | Save A Train
Home > Fiaran-dalamby Britain > 5 Mora raisina Transport Hacks Fa Luton Travelers
Matetika takon'ny ny ela ny lehibe kokoa aloky ny mpiara-belona London, Luton in Bedfordshire dia miafina izany vatosoa tsara mendrika ny fitsidihana.
Nanorina taorian'ny nahasamborana ny faritra amin'ny alalan'ny Saxons tamin'ny taonjato fahenina, dia nanomboka ainy ho 'Tun' (ponenana) izay naniry niakatra tamin'ny amoron 'ny Renirano Lea. Fast Forward taonjato vitsivitsy, ary 'Lea Tun' dia salantsalany tanàna tsena ny sasany 800 mponina, Tafavoaka velona izay tena amin'ny alalan'ny fambolena sy ny varotra.
Tato ho ato, Lutonites tompon-tany sy ny mpitsidika efa be dia be mba hiaro azy manintona be atao - ao anatin'izany ny toerana mafampana toy ny zaridaina maitso ary zava-kanto ara-tantara mahaliana an'ny Stockwood Discovery Center sy ireo havoana miovaova, lohasaha, ary tongotra lavitra lalana an'ny havoanan'i Barton Fikajiana voajanahary.
Ary izany koa dia mora mahazo toerana manodidina sy ny faladiany ho an'ny niainany marani-tsaina kokoa Nivezivezy - toy izany fa ao an-tsaina, ireto misy dimy mora raisina fitaterana hacks for Luton mpandeha.
Bus Tsidika mitondra miaraka aminy soa maro - izany mafy, mety, ary afaka mamela kely kokoa ny dian-tanan'ny karbaona noho ny fiara Tsidika (fa tsy mihoatra ny lamasinina, Ny fitsangatsanganana an-dalamby dia mbola heverina ho fitaterana indrindra amin'ny tontolo iainana).
Ary in Luton, izany manokatra ny mahagaga fahafahana hahalala an-toerana, izay avy hatrany ho tsapanao kokoa any an-trano.
Filan-kevitry ny fiara fitateram-bahoaka Luton lalana Info mendrika kevitra mialoha ny nahatongavany tao an-tanàna.
Raha toa ianao mipetraka any Luton nandritra ny fotoana kelikely, mividy bisikileta dia mamirapiratra hevitra.
Maro ireo toerana ambanivohitra mba hijerena teo akaiky teo, ary kodiaran-droa fitaterana mahatonga fikarohana afovoan-tanàna ny zaza milalao.
Tsingerin'ny mpanjaka tany 56-66 Dunstable Road in Luton dia manana isan-karazany ny bisikileta, anisan'izany ny herinaratra, tandems, ary na dia ny denaria aza - tena hahita zavatra mety ianao.
Afaka nandeha tany Luton mora foana ny famporisihan'ny lamasinina avy amin'ny toerana iray toy ny London, Birmingham ary koa Nivezivezy, ka tsy misy fialan-tsiny mba tsy hihevitra izany noho ny manaraka family holiday.
Browse Ny Luton National dalamby Station tranonkala pejy ary ianao hahita ny harena ny vaovao mikasika ny mahazo ny sy ny peo, fotodrafitrasa toy ny trano fidiovana, ary ny fidirana amin'ny fivezivezena.
Misy mihitsy aza mora raisina Map mba hahazoana antoka anao hahazo ny bearings - marani-tsaina.
Rehefa mieritreritra ianao hanoratanao Luton mena, famandrihana ny fiarakaretsaka mba hitondra anareo eo amin'ny fisotroan lavaka no hendry hevitra.
Ianao mahita be dia be curbside fiarakaretsaka safidy, fa goluton.com dia iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra mpandraharaha ary afaka mamonjy vola amin'ny famandrihana mialoha amin'ny aterineto.
Zava-dehibe iray hafa momba ny fitaterana taxi dia tsy mila mpamily voatondro ny vondronao rehetra mahazo aina mamelombelona mandritra ny alina.
Luton Airport dia mahatahotra launchpad ny sidina ho any amin'ny isan-karazany ny toerana mahafinaritra - anisan'izany Aberdeen, Malaga, ary Zurich - ka masoandro, ranomasina, ary na ny lanezy aza dia miala kely fotsiny.
Raha toa ianao fiara aina kokoa ho any amin'ny seranam-piaramanidina, SkyParkSecure.com manana Luton Airport fiantsonan'ny izany no antoka sy takatry.
Noho ny mitaingina stowed fahizay, dia afaka mahatsiaro ho tanteraka fiaramanidina eny tony tsara ny andro.
Araho ireo dimy hacks mora raisina ny fitaterana ary ianao hanao ny ankamaroan'ny Luton - afaka misaotra antsika taty aoriana!
Izany no amin'ny lisitra! Mizarà torohevitra momba ny dia manokana an'i Luton amin'ny fizarana an'ity bilaogy ity ao amin'ny Twitter.
Mba hahazo ny tsara indrindra ao London fiantsonan'ny fampiasana SkyParkSecure, fa mba hahazo ny tsara indrindra saran-dalana ho any Londres, fampiasana Save A Train.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-handy-transport-hacks-for-luton-travellers%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / zh-CN ny / en na / tr sy ny maro hafa fiteny.
#Airport #valan-javaboary Mpandeha Luton fiarandalamby